अहिले नेपालमा रहेकी रोबोट नागरिक सोफियाले जब भनिन् " तिमी अनमोल केसी होइनौ " !
अहिले नेपालमा रहेकी रोबोट नागरिक सोफियाले जब भनिन् ” तिमी अनमोल केसी होइनौ ” !
काठमाडाैं । साउदी अरवकी पहिलो रोबोट नागरिक सोफिया यतिबेला नेपालमा रहेकी छन्।
बुधवार काठमाडौँको याक एण्ड यति होटलमा उनलाई नै प्रमुख वक्ता बनाएर संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी)ले आयोजना गरेको ‘टेक्नोलोजी फर पब्लिक सर्भिसेस/डेभलपमेन्ट’ सम्मेलनमा उनले सम्बोधन गर्दैछिन्।
कार्यक्रमको सुरुवातमा कार्यक्रमका प्रोस्तोताले रोबोट मानव सोफियालाई नमस्ते सोफिया भन्दै कार्यक्रममा स्वागत गरे। त्यसपछि सोफियाले भनिन्, ‘नमस्ते मैले तिमीलाई पहिले पनि देखेकी थिएँ सायद ?’
त्यसपछि प्रस्तोताले भने, ‘सायद फिल्ममा देखेको हुनु पर्छ। म सानो कपाल भएको अनमोल केसी जस्तो देखिन्छु हैन’, भनेपछि सोफियाले तिमि अनमोल केसी हैनौँ भनेकी थिइन्।
यो रोबोटले मानिसले बोलेको कुरा गुगलको प्यारेन्ट कम्पनी अल्फाबेटले बनाएको आवाज पहिचान गर्ने प्रविधि प्रयोग गरिएको छ। जसले गर्दा प्रश्नहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्छ । सोफियामा अर्को सफ्टवेयर पनि प्रयोग गरिएको छ, जसले रोबोटलाई मानिसले सोधेको प्रश्न विश्लेषण गरी उत्तर दिन सघाउँछ । सोफियाले ६२ ओटा भावभंगी देखाउन सक्छिन्। सोफियाको आँखामा क्यामेरा जडान गरिएको छ जसले गर्दा उनले एक पटक भेटेको मान्छे या व्यक्तिलाई दास्रो पटक सजिलै चिन्ने गर्छिन्।
सुशासन कायम गरी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न प्रविधि र अन्वेषणले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने जानकारी गराउन सम्मेलन आयोजना गरिएको हो । सोफिया यो सम्मेलनमा सहभागिता लिन मंगलबार राति नेपाल आएकी हुन् ।
प्रकाशित : बुधबार, चैत ०७, २०७४१२:४०
बालुवा बेचबिखन गर्ने व्यवसायीसँग घुस माग्ने प्रहरी विरुद्ध मुद्दा दायर
भक्तपुरमा बिजुली मर्मत गर्न गएका एक जनाको करेन्ट लगेर मृत्यु !
मोरङमा अजिंगरले निल्यो सिङ्गै मृग, भिडियो बन्यो भाइरल (भिडियो सहित)
अन्तरप्रदेश समन्वय परिषदको बैठक सुरु , मुख्यमन्त्रिसँग रुष्ट प्रधानमन्त्री ओलीले के भन्लान ?
मोटरसाइकल अनियन्त्रित हुँदा चालक राईको मृत्यु